Global Voices teny Malagasy » Video: Fanatontosana raki-kira antsary ambanin’ny 99 USD · Global Voices teny Malagasy » Print
Video: Fanatontosana raki-kira antsary ambanin'ny 99 USD
Voadika ny 17 Aogositra 2010 2:57 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika miora
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Mozika, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Any amina indostria izay mitombo hatrany ny fandaniana, ny fanatontosana sy fandokafana horonantsarin-kira dia mety hanahirana. Ny vohikala 99 Dollar Music Video (horonantsarin-kira amina 9 dolar monja) dia manome fahalalahana ho an'ireo tarika sy mpanao sarimihetsika hamiratra miaraka amin'ireo famoronana horonantsary, alaina anatin'ny andro iray, avoaka ao anatin'ny andro iray ary tsy mihoatra ny 99 US Dollars ny sandany.
Toy izay anazavan'izy ireo azy :
$99 Music Videos dia tambajotra mahaleotena ao amin'ny aterineto miompana amin'ny mozika voatokana hanomezana sehatra ny low-fi [Avy amin'ny mpandika: feo iva karazana, mifanohitra amin'ny hi-fi] ireo horonantsary loha-laharana miaraka amin'ireo tsara indrindran'ny sehatry ny mozika amin'izao fotoana. Isan-kerinandro, mampisongadina ny horonantsary voalohan'ny tarika mahaleotena iray izahay izay nifampiraharaha tamin'ireo mpanatontosa sarimihetsika mba hanaovana raki-kira antsary vaovao iray, sy miavaka.
Raha avy any Etazonia ny ankamaroan'ireo raki-kira antsary, dia misy ny avy any amin'ireo firenena hafa kosa, ary androany dia omenay ohatra iray amin'ireo ianao. Avy any Brezila, ny mpitendry zava-maneno qinhO  sy drgameiro  nirotsaka tamin'ny fifaninanana, kanefa dia nandany 17 fotsiny izy tamin'ny raki-kira antsariny “Mais de uma Janela” :
Ao amin'ity fanadihadihana tamin'ny Skype  manaraka ity, ilay mpitendry zava-maneno sy ireo mpiandraikitra dia niresaka tao amin'ilay fantsona, izay rantsana iray ao anatin'ny Next New Networks .
Afaka manaraka an'i QuinhO ao amin'ny YouTube  ihany koa ianao.
Ny horonantsary dia navoakan'ireo artista na mpanatontosa sarimihetsika, ary raha manana horonantsary mifanaraka amin'ny fepetran-dry zareo ianao dia azo alatsaka ao anatin'ilay fantsona izany. Na dia niadana aza ny famokaran'ny fantsona  tato ho ato, manantena izahay fa hampitolagaga antsika izy ireo amin'ny famokarana vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/17/8239/
 anazavan'izy ireo azy: http://www.99dollarmusicvideos.com/page/about
 fanadihadihana tamin'ny Skype: http://www.99dollarmusicvideos.com/makingof/episode/99MV_20090901/interview-with-artist-qinho-and-directors-drgameiro
 Next New Networks: http://www.nextnewnetworks.com/